Barnaamijka caanka ah – Bogga 7 – Android – Vessoft
AndroidBarnaamijka caanka ah – Bogga 7
Codsiga rasmi ah ka adeega oo caan ah si aad u eegto video content kala duwan. Software wuxuu taageeraa kala duwan oo ka mid ah qalabka ay u saxaa ah video iyo Upload xiga in shabakadda.
Mobile9 – adeegyo kala duwan oo barnaamijyo iyo ciyaaro ah oo badal u ah Google Play. Software-ka waxaa ka mid ah noocyo kaladuwan iyo sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan badeecada.
GO Launcher EX – barnaamij softiweer ah oo loogu talagalay naqshada qalabka aaladda iyadoo la adeegsanayo hargahood oo kala duwan. Softiweerku wuxuu leeyahay aalado lagu habeeyo habsami u socodka dhaqdhaqaaqa, kobcinta widgets iyo cabirka shaashadda.
Software ee gacanta laga hago hawlaha shabakadda ee Console ciyaarta ka. Software ayaa awood u si ay ula xiriiraan dadka isticmaala adeegga iyo raac warka dunida ciyaarta.